Bartayaasha Luqadda Ingiriisiga
Macluumaadka 2019-2020 ee Ardayda & Qoysaska
Aqoonsiga Bilowga ah
Aqoonsiga bilowga ah ee ardayda waxaa sameeya Dugsiyada Dadweynaha Boston ee ku yaal Xarunta Soo-dhaweynta BPS maaddaama ay ardaydu iska diiwaangelinayaan Degmada. Tan waxaa ku jira maamulida sahaminta luqadda guriga iyo helitaanka sidan oo luqado badan ah.
Nidaamyada Qiimaynta Horukaca
Iyada oo la adeegsanayo qiimaynta ku saleysan macallinka, u kuurgelidda fasalka iyo natiijooyinka imtixaanka Helista, macallimiinta ELL waxay aqoonsadaan aagagga waxbarasho ee gaarka ah ee ay ku loolamaan ardayda gaarka ah waxayna dhisaan yoolalka shaqsiyadeed si loo gaaro aqoonta Ingiriisiga. Macallimiinteena dugsiga sare iyo dugsiga dhexe ESL-ka waxay hayaan dukumiinti soconaya oo kormeeraya waxqabadka ardayda. Dukumintiga ayaa la cusbooneysiiyaa laba jeer sanadkii waxaana ku jira dhibcaha imtixaanka, indho indhaynta macallimiinta, iyo yoolalka shaqsiyeed. Fadlan la xiriir macallinkaaga wixii faahfaahin ah.
Ka Qayb Qaadashada Waalidka / Ka Qaybgalka
BGA waxay ku faraxsan tahay inay qoysas badan ku firfircoon yihiin waxbarashada ardayda iyo hawlgallada iskuulkeena. Fursadaha qaarkood ayaa hoos ku taxan:
Golaha Ammaanada ee BGA - Xubnaha qoyska iyo xubnaha bulshada waxaa lagu casuumay inay ka soo qeyb galaan kullamada Gudiga Ammaanada guud ee BGA. Macluumaad dheeri ah ayaa laga heli karaa halkan .
Golaha Qoyska ee BGA - qoysaska waxaa lagu dhiirigelinayaa inay ka soo qeyb galaan kulan kasta oo ka dhaca ururkan firfircoon. Faahfaahinta waxaa laga heli karaa halkan .
BPS DELPAC - Golaha La-Talinta Waalidka Barte Ingiriisiga Degmadda ayaa u furan dhammaan xubnaha qoyska BGA. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan fursadan ayaa laga heli karaa halkan .
Tarjumida / Tarjumida
Dhammaan dukumiintiyada ardayda iyo qoysaska ay soo dirto BGA waxaa lagu diraa Ingiriisiga iyo luqadda koowaad ee guriga looga hadlo. Haddii aadan ka helin dukumiinti ku qoran luqadda ku habboon, fadlan noo soo sheeg sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah iyo qalabka turjuman ayaa la diyaarin doonaa sida ugu dhakhsaha badan ee suurogalka ah. BGA sidoo kale waxay leedahay adeegyo turjumaad oo laga heli karo taleefanka ama kulamada shaqsiyeed markii la codsado.
Xaaladaha dhif ah, waalidka / mas'uulka ayaa door bidaaya in ardaygooda uusan helin adeegyada ESL. Tani waxay u sabab noqon kartaa xiisaha diiradda waxbarashada ee aan ka ahayn ESL ama sababta oo ah qalad wadareed ayaa sababay ardaydaada inay u magacowdo Barte Luqadda Ingiriisiga. Si kasta ha noqotee, nidaamka ka bixida ayaa ka raba waalidka / mas'uulka inay u soo gudbiyaan codsiga ka-bixida qoraal ahaan. Tan waxaa lagu samayn karaa emayl ku qorista Kaaliyaha Madaxa ( jbecker@bostongreenacademy.org ) Ka bixida ayaa joojin doonta adeegyada ESL-ka ee ku saleysan heerka ELD. Si kastaba ha noqotee, ardayga laga joojiyey waxaa wali looga baahan doonaa inuu qaato imtixaanka ACCESS sannad kasta. Intaa waxaa sii dheer, ka bixista ayaa kaliya u wanaagsan hal sano oo waxbarasho. Haddii waalidka / mas'uulka / ardaygu doorto inuu mar labaad ka baxo, waxay u baahan doonaan inay soo gudbiyaan dokumentiga noocaas ah.
Nidaamka ka bixida iyo nidaamka
Nidaamka ka bixitaanka ardayda ELL ee ku jira DDB waa sida soo socota:
Arday kasta oo ku guuleysta buundada iskucelceliska ee 6.0 Imtixaanka Helista waa inaan mar dambe lagu dhigin EL.
Ardayda gaarta iskucelcelis ahaan iskucelcelis ahaan ugu yaraan 4.2 oo leh heer qoraal ah oo ah ugu yaraan 3.9 sannadka 2018 ACCESS ayaa u qalmi kara inay gaaraan heerka FLEP xaalad ahaan kiis ahaan. Tixgelinnada lagu gaarayo dib-u-soo-nooleynta FLEP waxaa ka mid ah.
Dhibcaha MCAS iyo tallaabooyinka kale ee degmadu go'aamisay
Macallinka ayaa sameeyay qiimeyn
Kormeerka macalinka iyo talooyinka.
Isbeddel kasta oo la soo jeediyo oo lagu sameeyo ardayda LEP lambar ee ka weyn ama ka yar 1 ELD heerka dhibcaha ka helitaankooda waa inay ugu dambeynti oggolaadaan OEL iyada oo loo marayo Foomka Codsiga Isbeddelka LEP.
Nidaamyada dib ugu laabashada ardayga ELL waa sida soo socota:
Dhammaan dib-u-soo-nooleyaashu waa talo-gelin ASPEN (Wixii isbeddel ah ee la soo jeediyo oo loogu talagalay ardayda LEP code ee ka weyn ama ka yar 1 heerka ELD ee dhibcaha Helitaankooda waa inay ugu dambeyntii ansaxiyaan OEL iyada oo loo marayo Foomka Codsiga Isbeddelka LEP).
Waalidka / mas'uuliyiinta ayaa la ogeysiinayaa isbeddelada
Diiwaanada iskuulka / degmada waa la cusboonaysiiyaa
Ardayda waxaa lagu kormeeraa LATF iyadoo loo maro foomka kormeerka DDB laba jeer sanadkii afar sano si loo hubiyo inay ku guuleysteen fasalada caadiga ah.
Haddii ardaygii hore ee “ELL” uu ku guuldareysto inuu sameeyo horumar sida ay go'aamisay kooxda kormeerka isagu / iyadu wuxuu ku laaban karaa heerka ELL.